Bayikhomba kweyonyaka ingoma kaDJ Hlo entsha
Bongiwe Zuma | June 20, 2022
USESHAYA ngengoma entsha uDJ wodumo lwengoma eyahlukanisa unyaka kuKhozi FM. UDJ Hlo usekhiphe ingoma entsha esihloko sithi Impilo Emnandi nokuyingoma apike kuyo uTee Jay noCheez Beezy.
Le ngoma enesigqi sama piano uke wagabisa ngayo ngenyanga edlule enamanye amaciko besayididyela e-studio. Impilo Emnandi uyimemezele ezinkundleni zokuxhumana eveza ukuthi useyikhiphile ngokusemthethweni isiyatholakala ezinkundleni zomculo. Lokhu kulandela ingoma yodumo Isibani ahlukanisa ngayo unyaka.
Yize unyaka sewugamenxe kodwa abantu abaningi balokhu bekhalile ngokuthi ingoma kaDJ Hlo yahlukanisa bengazelele ngoba wayesamusha kwezokungcebeleka engakaziwa. Kukhona ababona sengathi namanje Isibani asikalutholi udumo olufanele. Impilo Emnandi nayo ibingakatholi isasasa kakhulu okwamanje kwazise yintsha kodwa kukhona asebeyibheke kwengase ihlukanise unyaka.
" Umucu omnandi kunayo yonke emhlabeni," kusho uPhumlani Wiseman.
" Angiyazi le ngoma kodwa nginesiqiniseko sokuthi izowuhlukanisa unyaka," kusho uSizwe Cee.
" Impilo Emnandi ingoma evuthayo, angazi ngiyidlale kangaki namhlanje," kusho uLucas Sibhene.
Yize kukhona abancomayo kodwa bakhona nabangakamukeli ukuthi uDJ Hlo wahlukanisa unyaka. Babodwa abakhala ngokuthi Isibani abakasazi namanje futhi abezwa sidlala nasezindaweni eziningi okubalwa nemisakazo. Lokhu kubukeka sengathi kuzohlala kuvela uma ekhipha ingoma uDJ Hlo kwazise abantu izinkundla zokuxhumana bazisebenzisa njengendawo yokukhuluma noma yini abafisa ukuyidlulisa ngisho kosaziwayo.